အိုဇေးလ် မပါတဲ့ပွဲတိုင်းမှာ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲရခဲ့တယ်
အိုဇေးလ် Mesut Ozil မပါရင် အာဆင်နယ် ရလဒ်ပိုကောင်းလေ့ရှိလား
26 Nov 2018 . 7:28 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဘုန်းမောက်ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှာ အာဆင်နယ်အသင်းနည်းပြ အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery ဟာ အသင်းရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်လူ အိုဇေးလ် Mesut Ozil ကို အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် Line Up Out ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဘုန်းမောက်ကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး အူနိုင်းအမ်မရီကတော့ ကစားသမားတိုင်းကို အလှည့်ကျပွဲထုတ်သွားမယ်လို့လည်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အိုဇေးလ်ကို ပွဲထွက်စာရင်းမှာ ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း အူနိုင်းအမ်မရီက အခုလို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသေးတယ်။ “ဒီပွဲဟာ Physical ပိုင်းအရသာမက အကြိတ်အနယ်ကစားရမယ့် ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လို့ အသင်းအခြေအနေကောင်းဖို့အတွက်ပဲ ကျွန်တော် စဉ်းစားခဲ့တာပါ”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းမှာ အိုဇေးလ် ပါတဲ့ပွဲနဲ့ မပါတဲ့ပွဲကျရင် ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်လာလဲဆိုတာ စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အိုဇေးလ်မပါတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် (၃)ပွဲ (၀က်စ်ဟမ်း၊ ဖူလ်ဟမ်၊ ဘုန်းမောက်)မှာ ရာနှုန်းပြည့်အနိုင်ရခဲ့ပြီး (၁၀)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တယ်။ ၀က်စ်ဟမ်းနဲ့ ဖူလ်ဟမ်ပွဲတုန်းက အိုဇေးလ်ဟာ အဖျားရောဂါကြောင့် မပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ အူနိုင်းအမ်မရီအနေနဲ့ ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲမှာ သူ့ကို ဒဏ်ရာပြဿနာမရှိဘဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်လှပ်ခဲ့တာပါ။
အိုဇေးလ်မပါတဲ့ (၃)ပွဲမှာ အာဆင်နယ်ရဲ့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှသွင်းဂိုးက (၃.၃)ဂိုးအထိရှိပြီး သူပါတဲ့ ပွဲ(၁၀)ပွဲမှာ တစ်ပွဲပျမ်းမျှသွင်းဂိုးက (၁.၈)ဂိုးသာ ရှိခဲ့တယ်။ ပေးဂိုးမှာလည်း အိုဇေးလ်ပါတဲ့ပွဲဆိုရင် တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ပေးဂိုးက (၁.၃)ဂိုး၊ မပါရင် (၁)ဂိုးသာ ရှိပါတယ်။ အနိုင်ရာခိုင်နှုန်း၊ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအပိုင်းတွေမှာလည်း အိုဇေးလ်မပါရင် ပိုကောင်းတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ အချက်အလက်တွေဆိုတာကလည်း သိပ်တော့ ယုံစားလို့မရပါဘူး။ အိုဇေးလ်ဟာ World Class ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးဖြစ်လို့ သူ့ကို ချန်လှပ်ဖို့ဆိုတာက အရမ်းစွန့်စားရာကျပါလိမ့်မယ်။ ကဲ . .အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေရော . .အိုဇေးလ်ကို လူစာရင်းက ချန်လှပ်သင့်လား မသင့်ဘူးလားဆိုတာ ဖြေခဲ့ကြပါဦး . . .
Photo:Arsenal News,Tech2,Daily Mail
အိုဇေးလျ Mesut Ozil မပါရငျ အာဆငျနယျ ရလဒျပိုကောငျးလရှေိ့လား
ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေကေ့ ဘုနျးမောကျကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဂျပှဲမှာ အာဆငျနယျအသငျးနညျးပွ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery ဟာ အသငျးရဲ့ အဓိက ကှငျးလယျလူ အိုဇေးလျ Mesut Ozil ကို အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ Line Up Out ခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ဘုနျးမောကျကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွီး အူနိုငျးအမျမရီကတော့ ကစားသမားတိုငျးကို အလှညျ့ကပြှဲထုတျသှားမယျလို့လညျး ဆိုခဲ့ပါတယျ။ အိုဇေးလျကို ပှဲထှကျစာရငျးမှာ ခနျြလှပျခဲ့တဲ့အတှကျလညျး အူနိုငျးအမျမရီက အခုလို ရှငျးလငျးခဲ့ပါသေးတယျ။ “ဒီပှဲဟာ Physical ပိုငျးအရသာမက အကွိတျအနယျကစားရမယျ့ ပှဲတဈပှဲဖွဈလို့ အသငျးအခွအေနကေောငျးဖို့အတှကျပဲ ကြှနျတျော စဉျးစားခဲ့တာပါ”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးမှာ အိုဇေးလျ ပါတဲ့ပှဲနဲ့ မပါတဲ့ပှဲကရြငျ ဘယျလိုရလဒျထှကျလာလဲဆိုတာ စဈတမျးထုတျကွညျ့ခငျြပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးဟာ အိုဇေးလျမပါတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ (၃)ပှဲ (ဝကျဈဟမျး၊ ဖူလျဟမျ၊ ဘုနျးမောကျ)မှာ ရာနှုနျးပွညျ့အနိုငျရခဲ့ပွီး (၁၀)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တယျ။ ဝကျဈဟမျးနဲ့ ဖူလျဟမျပှဲတုနျးက အိုဇေးလျဟာ အဖြားရောဂါကွောငျ့ မပါဝငျခဲ့တာဖွဈလို့ အူနိုငျးအမျမရီအနနေဲ့ ဘုနျးမောကျနဲ့ပှဲမှာ သူ့ကို ဒဏျရာပွဿနာမရှိဘဲ ပထမဆုံးအကွိမျ ခနျြလှပျခဲ့တာပါ။
အိုဇေးလျမပါတဲ့ (၃)ပှဲမှာ အာဆငျနယျရဲ့ တဈပှဲပမျြးမြှသှငျးဂိုးက (၃.၃)ဂိုးအထိရှိပွီး သူပါတဲ့ ပှဲ(၁၀)ပှဲမှာ တဈပှဲပမျြးမြှသှငျးဂိုးက (၁.၈)ဂိုးသာ ရှိခဲ့တယျ။ ပေးဂိုးမှာလညျး အိုဇေးလျပါတဲ့ပှဲဆိုရငျ တဈပှဲပမျြးမြှ ပေးဂိုးက (၁.၃)ဂိုး၊ မပါရငျ (၁)ဂိုးသာ ရှိပါတယျ။ အနိုငျရာခိုငျနှုနျး၊ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှုအပိုငျးတှမှောလညျး အိုဇေးလျမပါရငျ ပိုကောငျးတာကို တှရေ့မှာပါ။
ဒါပမေဲ့ အခကျြအလကျတှဆေိုတာကလညျး သိပျတော့ ယုံစားလို့မရပါဘူး။ အိုဇေးလျဟာ World Class ကှငျးလယျလူတဈဦးဖွဈလို့ သူ့ကို ခနျြလှပျဖို့ဆိုတာက အရမျးစှနျ့စားရာကပြါလိမျ့မယျ။ ကဲ . .အာဆငျနယျပရိသတျတှရေော . .အိုဇေးလျကို လူစာရငျးက ခနျြလှပျသငျ့လား မသငျ့ဘူးလားဆိုတာ ဖွခေဲ့ကွပါဦး . . .